Magaalada Tucson Arrimaheeda Codsiga Soo jeedinta Hoy la'aanta/Briijka Hawlaha Guryeynta & Adeegyada Taageerada - Iskaashiga Tucson Pima si loo soo afjaro Hoyla'aanta
Magaalada Tucson Arrimaheeda Codsiga Soo jeedinta Hoyga Aan-Jahanayn/Briijka Hawlaha Guryeynta & Adeegyada Taageerada
by	Jason Thorpe	/ Talaado, 16 Noofembar 2021	/ Published in Community, Featured, Hada Farxad
Codsiga Arrimaha Soo jeedinta ee Magaalada Tucson
Hoyga Aan-Ururka ahayn/Guryaynta Buundada
Hawlaha Hoyga (Baaxadda Shaqada 1) iyo Adeegyada Taageerada (Baaxadda Shaqada 2)
Jawaabaha waxa la filayaa: Diseembar 6, 2021, 12:00pm (Duhurnimo)
Soo deji Codsiga Soo jeedinta oo dhan Lifaaqyada
Soo deji Foomka Miisaaniyadda Excel ee Waajibka ah
Magaalada Tucson waxay la qorshaysay bulshada si ay uga jawaabto fayraska COVID-19 oo ay kordhiso khatarta ka dhex jirta dadka aan gabbaad lahayn iyadoo la taageerayo laguna maalgelinayo dadaallada lagu bixinayo guriyaynta iyo adeegyada kale dadka ay la kulmaayo ama halis ugu jirto inay la kulmaan guri la'aan. Magaalada Tucson waxay heshay maalgelin dheeri ah iyada oo loo marayo Sharciga CARES iyo Sharciga Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka si wax looga qabto baahiyaha degdega ah ee la xiriira COVID-19 iyo guri la'aanta. Natiijada xaaladda degdegga ah ee caafimaadka ee COVID-19, awoodda hoyga oo la balaadhiyo ayaa loo baahan yahay si loo dhimo halista dhibaatooyinka caafimaad ee dadka nugul ee la kulma hoy la'aan aan gabaad lahayn. Si wax looga qabto farqigan muhiimka ah, Magaalada Tucson waxay iibsatay guryo badan oo loo isticmaalo gabaad aan la ururin waxayna leedahay iibsi dheeraad ah oo hadda socda.
Maalgelinta mashruuca waxaa ku jiri doona Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka ee Gobolka iyo Sanduuqa Soo kabashada Maaliyadeed ee Maxaliga, Qorshaha Samatabbixinta HOME American, Deeq Xalinta Degdegga ah - Sharciga CARES, iyo/ama ilo kale oo federaal ah, gobol, iyo maxalli ah. Codsadayaasha la xushay waxaa looga baahan doonaa inay si buuxda ugu hoggaansamaan shuruudaha Federaalka ee lagu dabaqi karo marka laga reebo haddii ka-dhaafitaanka shuruudaha caadiga ah ay heshay Magaalada Tucson oo ay u oggolaatay inay u adeegsadaan soo-bixiyaasha la doortay ee qoraal ah Magaalada Tucson.
Filashooyinka ayaa laga yaabaa inay u kobcaan iyadoo lagu salaynayo isbeddelada kaabayaasha deegaanka, heerarka caabuqa, iyo jawaabta bulshada ee masiibada socota ee COVID-19. Bixiyeyaasha la doortay ayaa looga baahan doonaa inay si dhow ula shaqeeyaan kooxaha bulshada oo ay hagaajiyaan adeegyada sida ay farto Magaalada Tucson.
SHIRKA SOO jeedinta ka hor (Noofambar 29, 2021 - 9 subaxnimo-10:15 subaxnimo)
Magaalada Tucson waa inay qabataa shir horudhac ah oo hordhac ah laga bilaabo 9:00 subaxnimo ilaa 10:15 subaxnimo Isniinta, Noofambar 29, 2021. Dhammaan bixiyayaasha waxa si adag loogu dhiirigelinayaa inay si buuxda u eegaan Codsiga Soo jeedinta iyo inay ka soo qaybgalaan shirka soo jeedinta ka hor. Bixiyeyaasha waxaa la siin doonaa fursad ay ku weydiiyaan su'aalo gaar ah oo la xiriira Codsiga Soo jeedinta iyo baaxadda shaqada ee la codsaday inta lagu jiro shirka soo jeedinta ka hor.
Bixiyeyaasha daneynaya waa inay iska diiwaan galiyaan shirka soo jeedinta ee goobta https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Y9hYtyRsQ2iZZ3DdafhI_w.
ADEEGYADA LAGU BADBAADO CODSIGAN EE SOO jeedinta
Magaalada Tucson waxay ku martiqaadaysaa soo jeedinta hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn ee u-qalma ee leh awoodda ay ku bixiyaan Hawlaha Hoyga Aan-Jaha lahayn iyo Adeegyada Taageerada ee tas-hiilaadka hoyga aan la ururin ee kala duwan oo ay leedahay Magaalada Tucson. Magaalada Tucson waa inay soo saartaa abaal-marino kala duwan oo loogu talagalay Hawlgallada Hoyga Aan-Jirka ahayn iyo Adeegyada Taageerada laakiin waxay ku dari doontaa doorbid bixiyayaasha awoodda u leh inay bixiyaan labadaba baaxadda shaqada hal xarun iyo/ama baaxado badan oo shaqo ah xarumo badan.
XARUNTA AY KU JIRTO CODSIGAN SOO jeedinta
Magaalada Tucson waxay rabta inay bixiso hal ama ka badan abaal-marinaha maalgelinta ee Hawlgallada Hoyga iyo Adeegyada Taageerada ee Aan-jarada ahayn ee xarumaha soo socda. Codsadayaasha xiisaynaya waxay ku kaxaysan karaan guryaha laakiin ma gali karaan guryaha mana u dhawaan karaan kiraystayaasha ama hawl wadeenada hadda jira.
Deegaanka Wildcat: Hanti 49-cutub ah oo ku taal 1701 N. Oracle Road ee Tucson, Arizona.
Deganaanshaha Desert Cove: 23 qol oo dhismeyaal badan leh oo ku yaala 1833 W. Anklam Road ee Tucson, Arizona.
Deganaanshaha Oracle: 18-cutub matoor guri oo ku yaala 2445 N. Oracle Road ee Tucson, Arizona.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xarun kasta ayaa lagu bixiyay Bandhiga A - Dulmarka Xarunta iyo Shuruudaha Bixiyaha oo lagu bixiyay lifaaq ahaan Codsiga Soo jeedinta.
Iyadoo la raacayo habraaca maalgelinta federaalka, Codsigan Soo jeedinta waxa ku jira laba nooc oo shaqo oo kala duwan. Abaalmarino gaar ah ayaa la siin doonaa nooc kasta oo shaqo ah; si kastaba ha ahaatee, bixiyeyaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay soo gudbiyaan codsiyo shaqo oo kala duwan.
Baaxadda Shaqada #1 - Hawlgallada Guriyeynta ee Buundada ee Aan-isku-jirka ahayn: Hawlaha hoyga waa in lagu maalgeliyaa iyada oo la isticmaalayo Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka ee Gobolka iyo Maalgelinta Soo-kabashada Maaliyadeed ee Maxaliga ah iyo/ama ilo kale oo federaal, gobol, ama maxalli ah. Hawlaha hoyga waxaa ka mid ah ilaalinta aasaasiga ah iyo hawlaha hoyga, qaadashada, kaydinta, iyo warbixinta, amniga iyo kormeerka 24-saac. Baaxadda buuxda ee shaqada ee qeexaysa shuruudaha bixiyayaasha waxa loo bixiyaa sida Bandhiga B - Hoyga Aan-Ururka ahayn/Bridged Housing Baaxadda Shaqada oo ku lifaaqan Codsiga Soo jeedinta.
Baaxadda Shaqada #2- Adeegyada Taageerada Guryeynta ee Hoyga/Briijka Aan-Jid ahayn: Adeegyada taageerada waa in lagu maalgeliyaa iyada oo la isticmaalayo lacagta Qorshaha Samatabbixinta ee Guriga (HOME-ARP) iyo/ama ilo kale oo federaal ah, gobol, ama maxalli ah. Adeegyada taageerada waa in la siiyaa dhammaan dadka deggan guryaha hoyga/ buundada aan-jarada ahayn oo laga yaabo in aan looga baahnayn in la helo ama la ilaaliyo degenaanshaha guryaha hoyga/ buundada aan-jarada ahayn. Adeegyada taageerada ee loo baahan yahay waxaa ka mid ah maareynta kiis, caawimaad guri raadin, cunto ama gargaar cunto, iyo isku xirka adeegga. Bixiyeyaashu waa laga yaabaa oo lagu dhiirigelinayaa inay sidoo kale bixiyaan adeegyo taageero oo ikhtiyaari ah sida lagu qeexay Bandhigga C - Adeegyada Taageerada Hoyga / Buundada Aan-Jahanayn ee Guryeynta oo ku lifaaqan Codsiga Soo jeedinta.
Magaalada Tucson ma aysan dejin ugu yaraan tirada ugu badan ee la codsado. Bixiyeyaasha waxaa lagula talinayaa in ay soo jeediyaan miisaaniyad aan fiicneyn, tartan leh oo taxaddar leh, macquul ah, oo lagama maarmaan u ah bixinta adeegyada la soo jeediyay. Kharashka guud waxa loo xisaabin doonaa arin ahaan marka la dooranayo dalabyo u qalma. Bixiyeyaasha ku kaca dhaqaalaha ama isbarbardhigga miisaaniyada dibadda ayaa laga yaabaa in mudnaanta la siiyo doorashada.
Magaalada Tucson waxay filaysaa in la sameeyo hal ama in ka badan abaal-marinaha hoos yimaada codsigan. Soo-bixiyeyaashu waxa ay codsan karaan ilaa inta ugu badan ee lagu sifeeyay baaxad kasta oo shaqo oo ku jirta codsiga. Magaalada Tucson waxa ay xaq u leedahay in ay kordhiso/yarayso miisaaniyada abaal-marinta ama in aanay wax abaal-marin ah ku samayn codsigan iyada oo ay go'aan tahay.
Lacago dheeraad ah ayaa laga yaabaa in la helo wakhti dambe si loo balaadhiyo ama loo sii wado mashruuca wixii ka dambeeya wakhtiga mashruuca bilowga ah. Adeegyada mashruuca waxaa laga yaabaa in loo qoondeeyo miisaaniyada muddada waxqabadka ee lagu sheegay qayb kasta baaxadda shaqada; si kastaba ha ahaatee, qoysaska waa in sida ugu dhaqsaha badan looga baxaa isku filnaansho ama kaalmo/adeeg guriyeynta muddada dheer.
SU'AALAHA KU SAABSAN ARDAYGAN
Dhammaan su'aalaha khuseeya codsigan waa in lagu soo diraa iimaylka jason.thorpe@tucsonaz.gov. Fadlan u ogolow ilaa laba maalmood oo shaqo jawaabta.